संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने की एमसीसी तिर भौंतारिएर देशलाई परनिर्भर बनाउने? – HostKhabar ::
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने की एमसीसी तिर भौंतारिएर देशलाई परनिर्भर बनाउने?
२०६२/६३ कोे आन्दोलनको राजनीतिक परिवर्तपछि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमार्फत २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो । यसै अवशरमा आज हामी संविधान दिवस मनाइरहेका छौं । आज संविधान आएको ५ बर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३१ वटा मौलिक हक र तिनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कार्यान्वयन भए की भएनन् भन्ने कुराको मन्थन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । संविधानले दिएका मौलिक हकका आधारमा १७ र संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान अनुरुप ३ सय १७ वटा ऐनहरु बनेको अवस्था छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका हक अधिकारका कुरा गर्दा यो निकै उपलव्धिपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको छ । यसको कार्यान्वय पक्षका बारेमा भने जनताले प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरु रहेका छन् ।
मौलिक हकको कार्यान्वयन खोई?
मौलिक हकको व्यवस्था जनताका लागि विशेष व्यवस्था हो । यस अनुसार संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनभूति आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् । त्यसो भए हामीले बनाएको संविधान र त्यसमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकका धाराहरू के का लागि त? जव मौलिक हक कै अनुभूति गराउन सकिँदैन भने त्यो सरकारको के काम? संविधानले जनतालाई दिने भनेकै हक र अधिकारहरु हो ।
संविधान र त्यसमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकका धाराहरू के का लागि त? जव मौलिक हक कै अनुभूति गराउन सकिँदैन भने त्यो सरकारको के काम? संविधानले जनतालाई दिने भनेकै हक र अधिकारहरु हो ।
यस्ता कुराहरु संविधानमा उल्लेख गरेर मात्रै पुग्दैन, तिनको कार्यान्वयन गरेर अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । अनि मात्र त्यो जनताको संविधान भएको ठहर्छ । यसरी हेर्दा संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको कार्यान्वयन ३ बर्षभित्र आवश्यक कानून बनाएर गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि त्यो सवै प्रावधान आज सम्म पनि पुरा भएको छैन । यसको जवाफ सरकारले दिने की नदिने?
प्रदेश सञ्चालन सम्वन्धि ऐन र कानूनहरु किन बनेनन्?
संविधान अनुरुप देश संघियतामा गइसकेर यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशहरु नाम मात्रैका बनेको जनताको गुनासो छ । प्रदेशले बनाएको ऐन कानून स्थानीय सरकारले नमान्ने र संघ तथा प्रदेश विचको समन्वयमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । जसको परिणाम प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि तिनले काम गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश प्रहरी गठन र समायोजनसम्बन्धी कानुन आएको आठ महिना भइसक्दा पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लगिएका छैनन् ।
अर्कोतिर स्थानीय सरकारले बनाएका कानूनहरुमा नयाँ कुरा केही पनि छैन । पुरानै कुरालाई जसोतसो दायाँ–बाँया पारेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ भने तिनले बनाएका नियम कानूनहरु अर्को तहको सरकारले नमान्ने परिस्थिती श्रृजना भएको छ ।
संवैधानिक आयोगहरु गठनमा ढिलाई र कतिपयका पद अझै रिक्त
वृहद शान्ति सम्झौतको मर्म अनुसार देशमा स्थायी शान्ति स्थापनार्थ संविधानमैं उल्लेख भएका महत्वपूर्ण २ आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग हुन् । तिनले गरेका कामहरुले पुर्णता पाउन नसक्दा द्वन्द्वको घाउ अझै बल्झिइरहेको छ ।
समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिमसहितका सातवटा संवैधानिक आयोगहरू संविधान लागू भएको पाँच वर्षसम्म गठन गरिएका छैनन् । संविधान प्रारम्भ भएको मितिदेखि यी आयोगको आयु १० वर्ष तोकिएको छ । उक्त अवधिपछि आयोगहरूको पुनरावलोकन गरिने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ ।
आधा अवधि गुज्रिसक्दा कुनैमा अध्यक्ष मात्रै छन् भने कुनै आयोग पूरै रिक्त छन् । पदाधिकारी नभएपछि आयोगहरूले तोकिएको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । यी आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारलाई केहीले छेकेको छैन । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेतासँगको परामर्शमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ । तर सरकार यसप्रति उदासीन छ ।
प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी आयोग गठनको अत्तोपत्तो छैन । एक वर्षभित्र भाषा आयोगको गठन गरिनुपर्ने भनिएपनि त्यसले समेत पुर्णता पाउन सकेको छैन । यसर्थ, सरकार जवाफदेही भएको ठान्दछ भने यी यावत महत्वपूर्ण कुराहरुमा सरकार मौन बस्न मिल्दैन ।
यी बाहेक नागरिकता सम्वन्धि समस्या अहिले सम्म पनि सरकारले समाधन गर्न नसक्दा लाखौं युवा युवतीहरु नागरिकता पाउन बाट बञ्चित भएका छन् । त्यस्तै, प्राकृति श्रोत साधनको बाँडफाँड सम्वन्धि व्यस्थालाई सम्बोधन गर्न बनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राजस्वको बाँडफाँट, अनुदानको मापदण्ड तोक्ने, सिफारिस गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आयोगको छ । प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी आयोग गठनको अत्तोपत्तो छैन । एक वर्षभित्र भाषा आयोगको गठन गरिनुपर्ने भनिएपनि त्यसले समेत पुर्णता पाउन सकेको छैन । यसर्थ, सरकार जवाफदेही भएको ठान्दछ भने यी यावत महत्वपूर्ण कुराहरुमा सरकार मौन बस्न मिल्दैन ।
संविधान कार्यान्वयनलाई छोडेर परनिर्भरवादी एमसीसी अनुमोदन मैं जोड किन?
नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ मा एक सम्झौता भएको थियो । विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो अवधि सम्म आइपुग्दा नेपालले संसद मार्पmत पारित गर्नुपर्ने एमसीसी अहिले पनि नेपालमा विवादित विषयका रुपमा रहेको छ ।
यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ । तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा विभिन्न शंका उपशंकाहरु उब्जाएको छ । शंका उब्जिनु एक सार्वभौम राज्यका लागि स्वभाविक पनि हुन आउँछ ।
कुनैपनि विदेशी दातृ निकाय वा देशले बिना स्वार्थ कुनैपनि खालको आर्थिक सहयोग न पहिला कसैले गरेको छ न आगामी दिनमा गर्छ । नेपाल भौगोलिक हिसावले पनि चीन भारतको रणनैतिक महत्वको क्षेत्रमा पर्दछ । यसको भौगोलिक अवस्थितीभित्र अमेरिका र युरोपियन देशहरुको पनि आ–आफ्नै स्वार्थ रहेका छन् । यस हिसावले सामान्य नागरिकले पनि एमसीसीका बिषयमा शंका गर्नु र त्यसलाई स्वीकार नगर्नु देशभक्ती भित्रको कुरा हो ।
अर्कोतिर २ तिहाईको बलमा बनेको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई चटक्कै छाडेर परनिर्भरता उन्मूख हुनुले जनतामा सरकारप्रति निराशा छाएको प्रष्ट छ । सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आवश्यक परेको खण्डमा केही बुँदा सच्याएर वा हटाएर भएपनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकले पनि सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जन गरेर भएपनि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
२ तिहाईको बलमा बनेको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई चटक्कै छाडेर परनिर्भरता उन्मूख हुनुले जनतामा सरकारप्रति निराशा छाएको प्रष्ट छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई मौलिक हकको प्रत्याभूति दिन छाडेर यो सरकार कहिले सम्म अर्काको अनुदानका आधारमा चल्छ? कहिले सम्म आर्थिक परनिर्भरता देशमा लाद्ने? देश बनाउँछु भनेर दुई तिहाईको सरकार बनाएकाहरुले कहिले सम्म देशलाई विदेशी नियोग र अनुदानमा चलाउने? के नेपालको श्रोत साधनलाई नेपाल आफैले उपयोग गर्न सक्दैन? भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारले कहिले सम्म जनतालाई संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित गराइरहने? चन्द्र शमशेरकै पालामा आएको रेल इतिहाँसलाई बिर्सेर अहिले मेट्रो चलाइसक्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ किनेको रेल कहिले सम्म भजाई रहने? यी यावत प्रश्नको जवाफ सरकारले जनतालाई दिन सक्नुपर्दछ ।
हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदा र संविधानका हक अधिकारलाई स्मरण गर्दा सरकारसंग अव हामीले हाम्रो अधिकारको कार्यान्वयन खोई भनेर सोध्नु पर्ने बेला आएको छ ।